MKV uu noqday qaab file video si weyn loo isticmaalo maanta, taas oo ay sabab u tahay awood si ay u bixiyaan daawadayaasha ay la video tayada qeexitaanka sare. MKV xamili karaan durdurrada dhow soo koobi karin oo warbaahinta dhijitaalka ah. Dhinacyada badan oo la videos iyo raad ah audio, file MKV ah waa ay awoodaan in ay taageeraan subtitles, bedeley, cutubka dhibcood, iyo metadata kale encoded. Taasi waa sababta filimada ugu aad oo dhan kala soo bixi kartaa in internet-ka ku jira qaab this. Laakiin waxa sidoo kale haddii aad rabto in aad noqon MTS aad soo gudbiso galay MKV u habboon oo dheeri ah? Dabcan waxa ugu fiican ee aad samayn karto waa in loogu badalo MTS aad soo gudbiso galay MKV, laakiin sida aad u samayn karaa? Waxaad isticmaali kartaa caawimo ah ee ay bixiyaan Wondeshare Video Converter kama dambaysta ah.
Si ay u badalaan aad file MTS galay file MKV, raac edbinta tallaabo-tallaabo ku qoran hoos.
Qeybta 1: MTS Best in Converter MKV
Qeybta 2: Free MTS in Converter MKV
Qeybta 3: MTS Online in Converter MKV
Waxaad kala soo bixi kartaa Wondeshare Video Converter waayo, hadda! Degsado iyo rakibaadda qaataa dhowr daqiiqo in la sameeyo.
Talaabada 2: Burcad Barnaamijka iyo soo dejinta File
Marka la rakibo waa dhameysatay, si deg deg ah lagu daahfuri barnaamijka by double magcaabo icon ah, marka laga furay, dajiyaan MTS ku soo gudbin aad rabto in aad si loogu badalo in ay MKV, waxaad u samayn kartaa adigoo riixaya badhanka + File dar iyo helitaanka meesha file ka dibna waxaa xulashada. Hab kale oo kale si ay u dajiyaan aad file waa ay u soo jiiday ka folder isha oo tagtey ee guddiga guddiga barnaamijka.
Marka aad file ayaa la keeno si ay barnaamijka, doorashada qaab wax soo saarka noqon lahaa tallaabada xigta inaad sameyso. Si tan loo sameeyo, riix kor iyo hoos arrow dhinaca midig ee suuqa kala barnaamijka iyo dooran MKV sida qaab wax soo saarka aad.
Talaabada 4: Beddelaan file MTS soo galeen file MKV
Markii wax walba la sameeyo, si fudud riix badhanka diinta iyo qaab beddelidda toos ah u bilaabi doonaa. Inta lagu guda jiro qaab beddelidda, waxaad joojin kartaa, yara, ka dibna mar kale sii raanta mar kasta oo aad u baahan yahay. Conversion ma socon aad u dheer, muddada diinta had iyo jeer ku xiran tahay tirada file ah in aad doonaysid in loogu badalo. Dabcan, ugu weyn tirada le'eg yahay, waqti dheer ku qaadan doonto inay ku dhameystaan ​​diinta.
Markaasaa waxaa aad u tagto, aad haatan ku raaxaysan karaan daawashada aad videos iyo ma aha oo kaliya in, aad xitaa ku dari kartaa subtitles ku yaal haddii aad rabto iyo waxa ay la wadaagto saaxiibadaa!
Free Video Converter: Wondershare Free MTS in MKV Converter
Barnaamijka software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fudud loogu badalo aad file MTS qaab file MKV si fudud u BILAASH. Iyagoo keliya ma aha in, waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad xaalkaa aad videos iyo sidoo kale kala soo bixi wax kasta oo video laga websites video qaybsiga dhan internet-ka mar kasta oo aad rabto in aad si aad u daawato, xitaa iyada oo aan gargaar ka mid ah internet.
Halkan waa weyn adeeg online taas oo ka caawisa badalo MTS si fudud MKV.
> Resource > Beddelaan > Sida loo rogo ama MTS in MKV